22.Jump.Street.(2014) မြန်မာစာတန်းထိုး ~ ဘလော့ခရီးသည်
22.Jump.Street.(2014) မြန်မာစာတန်းထိုး 12:44:00 pm
ဒီဇာတ်လေးဆိုရင်ဖြင့်လည်း IMDb Rating 7.1 မှာ အထိရရှိထားတဲ့ရဲ ဟာသ သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ရဲ့ အထူးသရုပ်ဆောင် တင်ဆက်ပြသထားတဲ့22.Jump.Street.(2012) ဇာတ်ကား အဆက်လေး ဖြစ်ပါတယ်။ ရဲဟာသ နှစ်ယောက်ရဲ့ ကျောင်းပြီးသွားတဲ့ အခါ လိုတလွဲတွေနဲ့ ဘယ်လို့ အမှုလိုက်ကြမလဲဆိုတာကို နောက်ဆုံး အနေနှင့် အဆုံးသတ် ဟာသတွေကို ကြည့်ရှုရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အရမ်းကြည့်ကောင်းတဲ့ ဇာတ်ကားလေးမို့ 22.Jump.Street ရဲ့ ထွက်ခဲ့သမျှ ဇာတ်ကားတွေကို တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။
ယခုဇာတ်ကားကိုဒေါင်းလော့ရယူရန် နှင့် တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုလိုသူများအောက်က Download Watch Movies ဆိုတာကို နှိပ်ပြီး ကြည့်ရှုဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်.။
22.Jump.Street.(2012) မြန်မာစာတန်းထိုး ဝင်ရောက် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
Posted in: မြန်မာစာတန်းထိုး ရုပ်ရှင်